murairo | Apg29
Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai nemutowo upi neupi.
Iye kuuya ndiro basa raSatani uye aita nesimba guru, pamwe nhema zvose nezviratidzo nezvishamiso, uye kose seductions pakati vaya vanoparara, nokuti havana kugamuchira rudo rwechokwadi, kuti vaponeswe.
A chakavanzika akatsanangura
Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika: Hatizorari tose hope [kufa], asi tose tichachinjwa, kamwe kamwe, muna nekubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, uye vakafa vachamutswa mukusaora, uye isu tichachinjwa.
Asi handidi, hama, kuti murege kuziva pamusoro pevaya vavete [akafa], kuti haufaniri kuchema sevamwe vasina tariro [kuti anoponeswa]. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa uye akamukazve, saizvozvo Mwari achaunza avowo vakarara muna Jesu naye.
Nokuti izvi tinokuudzai neshoko raIshe, kuti isu vapenyu, tinosara kusvikira pakuuya kwaIshe, hapana vauye vaya vavete pamberi [akafa]. Nokuti Ishe amene uchaburuka kubva kudenga ane kukurayira nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru uye nokurira kwehwamanda yaMwari, uye kutanga vakafa muna Kristu vachamuka.
Zvino isu vapenyu vakasara, tichabvutwa pamwe navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mumhepo. Naizvozvo tichava nguva dzose kuva naShe.
Naizvozvo kurudziranai namashoko aya.
Asi kana nguva nemwaka, hama, hapana chikonzero ndikunyorerei. Nokuti imi munoziva kwazvo kuti zuva raIshe rinosvika sembavha usiku. Naizvozvo, kana vachiti, Rugare nekugarika, anouya kuputsika pavo nokukurumidza akaita födslosmärtan womukadzi odokusununguka, uye havangapunyuki.
Asi imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iroro rikusvikirei sembavha. Imi muri vana vechiedza nevana nhasi. Hatizi vousiku kana verima.
Naizvozvo ngatirege hope sezvinoita vamwe, asi ngatisvinurei tipengenuke. Nokuti vaya vanorara, ivo kunorara usiku, uye avo vanodhakwa, vanodhakwa usiku.
Asi isu vemasikati anofanira vakasvinura, akapfeka nokutenda uye rudo yechipfuva, netariro yoruponeso senguwani. Nokuti Mwari haana kutisarudza kuti hasha, asi kuwana ruponeso kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatifira kuitira kuti isu, kana tichiona kana kuvata, kugara naye.
Naizvozvo, nyaradzanai uye uppbygg mumwe, sezvamunoitawo.
Asi tinokukumbirisai, hama, maererano naIshe wedu Jesu Kristu, nekuvunganira kwedu pamwe kwaari, kuti iwe hausi saka kutsanya, achirasikirwa musoro wake uye inofambidzana vakatya, kana nemweya kana neshoko, kana chipi tsamba, sezvo vakanga vatumwa kubva kwatiri sokunge zuva raKristu raiva waswedera.
Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai nemutowo upi neupi. Nokuti iro kwete, kana marara ndiyo [kuenda kushandura "kuenda"] zvakatojekeswa, uye munhu wechivi, mwanakomana wokurashika, kwakaratidzwa, inova anokumhan'arira nekuzvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari, kana zvinonamatwa, nokudaro kuti iye anogara pasi mutemberi yaMwari saMwari, uye anoti Mwari.
Hamurangariri kuti ndakakuyambirai ichi, ndichiri nemwi? Zvino munoziva chii chinonditadzisa saka kuti kutanga aratidzwe munguva yake. Nekuti chakavanzika chekusava nemurairo chava kutoshanda, asi chete kusvikira uya zvino chinondidzivirira kubviswa. Uye ipapo munhu asingateereri mutemo kunoratidzwa, uyo Ishe kuuraya nemweya wemuromo wake, uye kuparadza maererano zvinooneka kudzoka.
Uye nokuda kwechikonzero ichi Mwari achaita simba rekukanganisa, kuti vatende nhema, kuti vanofanira vatongwe, vose avo vasina kutenda chokwadi, asi vasina mufaro wavo mukusarurama.
1 VaK 15: 51-52, 1 Th 4: 13-18, 1 Th 5: 1-11, 2 Th 2: 1-12